Paska miavaka tsy ieren-doza • AoRaha
Paska miavaka tsy ieren-doza
Mivavaka mafy ny rehetra mba hidina ny isan’ireo olona mitondra ny tsimok’aretina «Covid-19». Ny tena mahamaika ny rehetra aloha ny hoe «mety tsy afaka hitsangantsangana amin’ny alatsinainin’ny Paska». Sady tsy azo hahemotra toy ireo hetsika maro efa niharan’izany ity fety kristiana ity. Raha ilay dimy ambin’ny folo andro fihibohana aloha dia tokony ho vita amin’ny 6 avrily ho avy izao e! Asa na efa hihena amin’izany ny isan’ireo marary na tsia.
Fa raha sanatria, marina moa, ka tsy mihena dia mety hitombo sy hihamafy kokoa noho izao tranga misy izao ny andro fihibohana. Izay vao ho tena henjana ny raharaha.
Tsy avy amin’iza anie no mahatonga izany fa noho isika rehetra ihany e! Rehefa asaina mihiboka dia tokony hihidy aman-trano sy hanaraka ny lamina apetraky ny fanjakana. Amin’izao fotoana izao dia toa andrasana toy ny omby, sanatria, vao hanaraka ny paika hoentina miady amin’ny valanaretina Coronavirus. Toetra efa mahazatra antsika moa izany.
Dia ho tiantsika ve ny hitohizan’ity loza efa mihatra aman’aina ity, na dia mbola tsy nisy aza aloha ny olona maty teto Madagasikara? Dia tena ho tanteraka ny dokambarotra isan-taona fanaon’ireo mpanakanto isaky ny vanim-potoana toy izao hoe “Paska miavaka”. Ary tsy handaitra ilay filamatry ny mpitandro ny filaminana hoe “Paska ierendoza”. Enga anie ka ho diso ny faminaniako.
Toe-tsaina mira fandrosoana